eNasha.com - उत्साहित निर्माता
मतिनाया कली, उच्चारण गर्न अप्ठेरो भयो ? ठीकै छ, अप्ठेरो हुनु स्वभाविक हो किनभने यो नेपाली होइन, नेवारी भाषा हो । यही दुइ शब्दको चलचित्र बनाएका निर्माता र निर्देशकहरु अहिले यो चलचित्रको चौतर्फी प्रशंसाबाट मुग्ध हुँदै अर्को चलचित्रको तयारीमा जुटेका छन् ।
गएको शनिबार उपत्यकाको गुण सिनेमा भवनमा यो चलचित्रको प्रथम प्रदर्शन गरिएको थियो । नेवारी चलचित्र भएका कारण यो सिनेमामा दर्शक पक्कै कम हुनुपर्छ भनेर सानो हलतिर लागेका केही दर्शक जिल्लिन पुगे । किनभने यो गुण सिनेमा 'क'मा प्रदर्शनी राखिएको थियो । त्यतिबेला केही दर्शक झन् अचम्ममा परे, जब ठूलो हलको १५ सयभन्दा बढी सिट खचाखच भरिएको थियो र केही त सिट नपुगेर भुइँमै बस्न पुगेका थिए ।
"हामीले ९० हजारभन्दा बढी त यो च्यारिटी शोबाट नै उठायौँ", चलचित्रका निर्माता यादव सिलवालले भने- "तर यो पैसा हामीले हाम्रा लागि होइन, एउटा संस्थाको सहयोगार्थ सिनेमा प्रदर्शन गरेका थियौँ ।"
च्यारिटी शोमा तर चलचित्रका नायक/नायिका, निर्माता/निर्देशक सबैका घरबाट पनि चलचित्र हेर्न आइपुगेका थिए । आफ्नी बहिनी प्रमुख भूमिकामा भएकाले त्यही दिनका लागि भनेर गायिका लसता जोशी चितवनबाट हौसला बढाउन आइपुगेकी थिइन् । "ऊ एउटी राम्रो कलाकार हो", बहिनीको अभिनयमा मख्ख परेकी लसताले बहिनी भिन्तुनालाई देखाउँदै भनिन्- "उसले म्युजिक भिडियोमा सिकेका धेरै कुराहरु सिनेमामा देखाइछ । मलाई त मन पर्‍यो !" लसता मख्ख पर्दै हाँसिन् ।
चलचित्रका निर्देशक सुरेश वज्राचार्य पनि चलचित्र आफूले सोचेजस्तै बनाउन सकेकोमा सन्तुष्ट देखिएका थिए, इनशाडटकमसँग भने- "यो कम्तीमा ५०/६० वर्षअघिको घटना हो, जुन नेवारी समाजमा घट्दै पनि आइरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा मैले आधुनिक घरहरु देखाउनु हुने थिएन र त्यो सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेकोमा सन्तुष्ट छु ।"
हुन पनि उनले खिचेका दृश्यमा आधुनिकताले छपक्क छोपेको काठमाडौँलाई पुरातन काठमाडौँ बनाइदिएका छन् । तापनि उनी सम्पूर्ण रुपमा सफल आफूलाई मान्न तयार छैनन्, भन्छन्- "अब एउटा नेपाली भाषामा गज्जबको सिनेमा नबनाई मेरो सिनेमाप्रतिको मोह कम हुनेवाला छैन ।"